Congress-ka Oo Meel-mariyey Xirmo Lacageed Oo Loogu Talo-galay COVID-19. – Heemaal News Network
Congress-ka Oo Meel-mariyey Xirmo Lacageed Oo Loogu Talo-galay COVID-19.
Koongareeska Mareykanka ayaa meel mariyey xirmad dhaqaale oo aad u ballaaran oo ka kooban $ 900 bilyan oo ah lacag gargaar ah oo loogu talogalay la tacaalidda coronavirus ah iyo $ 1.4 tirilyan oo doolar oo ah miisaaniyadda sanadeedka dowladda.
Labada aqal ee wakiilada iyo kan Senate-ka ayaa fiidnimadii Isniintii shalay si aqlabiyad ah ku meel mariyayay talaabadan, iyadoo mudaneyaashu ay haysteen saacado kooban oo kaliya si ay usoo darsaan sharcigan oo ka koobnaa in ka badan 5,000-bog.
Waxa ay wajahayeen mudada kama danbeysta ah ee saqdii dhexe ee xalay si ay dowladda Mareykanku usii waddo in ay hesho miisaaniyadda ay ku shaqeyso.
Madaxweyne Donald Trump ayaa la filayaa in uu saxiixo heshiiskan dhaqaale maalmaha soo socda.
Sharcigan ayaa yimid ka dib todobaadyo wadahadallo ay u socdeen hogaamiyaasha xubnaha Dimuqraadiga iyo Jamhuuriga oo isku khilaafsanaa xaddiga kaalmada dowlada ee lagu bixinayo gargaarka coronavirus iyo haddii ay tahay in diirada la saaro waxyaabaha sida lacagaha la siiyo dadka shaqo la’aanta ama in ganacsiyadu ay sii furnaadaan.
Jubbaland Oo Wareegto ku Magacaawday Mas’uuliyiin Cusub.(Akhriso)